Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif oo gaaray magaalada Kismaayo – Somali Top News
Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif oo gaaray magaalada Kismaayo
October 10, 2019 Somali Top News	0 Comments Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif oo gaaray magaalada Kismaayo
Gudoomiyaasha Xisbiya Hilimo qaran ahna madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmad ayaa gaaray Magaaladda Kismaayo ee Xarunta Ku meel gaar ah ee Maamulka Jubbaland.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed hadana ah Gidoomiyaha Xisbiga Himilo qaran axaa ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Jubbaland,Xildhibaano ka tirsan Labadda Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Magaaladda Kismaayo .
Sheekha ayaa loo galbiyay Xarunta Madaxtooyada Jubbaland ee Kismaayo waxaana halkaasi ay kala hadli doonaa warbaahin.
Ujeedka Socdaalka wafdigaan ayaa ah ka qayb galka Caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo Kismaayo ka dhacaysa Sabtigga sida Masuuliyiin ka tirsan Jubbaland Mustaqbal u sheegeen.
Kismaayo ayaa Waxaa horay u gaaray Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dene iyo Masuuliyiin kale.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wafdigiisa ayaa muddo kooban lagu hakiyay Garoonka Muqdisho ka hor inta aysan bixin, kaddib markii Laamaha amniga Garoonka ay sheegeen in aysan heynin macluumaadka bixitaankiisa wafdigiisa.
← Madaxweynihii dalka Xasan Sheekh oo si diiran loogu soo dhaweeyay Kismaayo
Mowjadaha siyaasadeed ee ku soo food leh Dowladda Federalka →
Militiriga Itoobiya Oo Xabsiga U Taxaabay Cabdi Iley Iyo Xaalada Jigjiga Oo Isbadashay
August 7, 2018 August 7, 2018 Somali Top News 0
Guddoonka Baarlamaanka Hirshabeelle oo muddo kawada maqan magaalada Jowhar
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo howlgal ka sameysay dagmada Jalalaqsi